DTS Virtual: X - Maqal Maqal la'aan Waajibaadka
DTS Virtual: X Muuqaal Gaar ah - Waxa aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Cadaadin Muuqaal Muuqaal Sare iyo Dib u Noqoshada Hadal Kale
DTS Virtual: X waa magac murugo leh, laakiin asal ahaan waxa loola jeedaa samaynta dhowr qof oo ku hadla afafka sida badan oo ku hadla.
Maxay tahay baahi loo qabo DTS Virtual: X?
Mid ka mid ah waxyaabo cabsi galin ah oo ku saabsan waayo-aragnimada guriga masraxa ah ayaa ah xajmiga tirada codadka ee ku xeeran . Iyada oo ku xiran nooca iyo nooca aqalka masraxa guriga , AV preamp / processor , ama Nidaamka qolka-guriga-qolka-guriga waxaad ku qeexi doontaa qaababka codka ee ku xeeran ee aad haysato.
Waxa intooda badani ay leeyihiin caadi, nasiib daro, waa inay u baahan yihiin dad badan oo hadlaya.
Si kastaba ha noqotee, marka la barbardhigo caanaha dhawaaqa iyo dhegeysiga dhageysiga, su'aasha ayaa ah sidee ayaad u heleysaa khibrad uduban oo aan haysan dhammaan kuwa ku hadla?
DTS waxay hawshan ku qaadatay horumarinta iyo hirgelinta qaabkeedii Virtual: X.
Dhisid aasaaskii hore ee DTS: X iyo DTS Neural: X wareega codka, DTS Virtual: X wuxuu fidiyaa isbeddellada ku wajahan waayo-aragnimo dhageysiga dheeraadka ah oo aan lahayn baahi badan oo ku hadla.
DTS Virtual: X waxaa loogu talagalay in loogu talagalay qaadayaasha aqalka maskaxda iyo baararka dhawaaqa, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si loo kordhiyo nidaamka codka TV-ga.
Sidee DTS Virtual: X Shaqeeyaa
Tiknoolijiyada ka dambeeya DTS Virtual: X waa mid aad u adag, laakiin marka la eego aasaasiga, marka la kiciyo, waxay falanqeeyaan calaamadaha dhawaaqa soo noqnoqda waqtiga dhabta ah, ka dibna waxay shaqaaleeyaan algorithiyada casriga ah ee sameeya qiyaasta ugu fiican marka dhawaaqa gaar ah lagu dhejiyo dhegeysiga 3-Meel meel bannaan oo aan laga hadlin. Meelaha codka waxaa ku jiri kara midhooda dambe iyo / ama dhawaaqyada sare.
Nidaamku wuxuu dhagaystaa dhagaha dhagaystayaasha isagoo dareensanaanta joogitaanka "phantom" ama "wicit" ku hadla xitaa haddii laga yaabo inay noqoto mid ka mid ah laba qof oo ku hadla afka ah.
Tani waxay micnaheedu tahay in DTS Virtual: X ka shaqeyn karaa nooc kasta oo ka mid ah signalka codka wadada ah ee kanaalka, ka socota stereo laba-gees, 5.1 / 7.1 channel oo wareegsan , si aad u dhageysiga 7.1.4 codka kanaalka ah , isticmaalna isku-qasidda stereo) iyo wax ku darsiga qaababka kale ee codka, kuwaas oo abuuraya aalad cod leh oo ay ku jiraan dhererka iyo / ama walxaha ku wareegsan wareegsan iyada oo aan loo baahnayn kuwa ku hadla ama derbi ama saqafka dheeraadka ah.
DTS Virtual: X Codsiyada
DTS Virtual: X waa doorasho weyn oo loogu talagalay baararka dhawaaqa, maadaama ay keeni karto khibrad ku habboon oo ku wareegsan xitaa haddii aad haysatid 2 (bidix, midig) ama 3 (kan bidix, midig, midig) (oo laga yaabo inuu subwoofer) ee hore ee aagga dhegeysiga.
Sidoo kale, aqaliyayaasha masraxyada guriga, haddii aadan rabin inaad ku xirto dhererka ama kuwa sarreeya, DTS Virtual: X processing wuxuu ku siinayaa nooc kale oo aad ku qanacsan tahay, maaddaama hannaanka wareegsan ee wareegsan ee wareega ah uu yahay mid cakiran, laakin Virtual: X wuxuu soo saari karaa kanaalka dusha sare leh iyada oo aan loo baahnayn dadka ku hadla.
Tusaalooyinka muraayadda dhawaaqa iyo qalabka aqalka masraxa ee guriga DTS Virtual: X waxaa laga yaabaa inuu ku habboon yahay:
Codka Bar ama maqalka codka leh subwoofer: DTS Virtual: X wuxuu abuuri karaa 2 xajmiga wareega ah ee wareegsan iyo illaa afar qaybood oo daboolan.
Sound Bar oo leh kuwa ku wareegsan agagaarka deegaanka iyo subwoofer: DTS Virtual: X wuxuu abuuri karaa illaa afar qaybood oo khidmado ah si loo dhamaystiro nidaamka codka maqalka.
Qalabka Tiyaatarka Aqalka ee leh habka caadiga ah ee 5.1 ama 7.1 kanaalka: DTS Virtual: X wuxuu abuuri karaa ilaa afar fuusto dusha sare ah marka lagu daro hadyaqaanada jireed horay u joogeen. Tusaale ahaan, DTS Virtual: X waxay labadaba ku dari karaan fiilada lixaad iyo kan toddobaad iyo laba qaybood oo dherer ah illaa 5.1 aqbaarta kanaalka ama illaa afar qaybood oo gaabis ah si ay u helaan 7.1 kanaal.
DTS Virtual: X iyo TV-yada
Sababtoo ah TV-yada maanta waa mid khafiif ah, ma jirto qol ku filan oo lagu daro nidaamyada ku hadla oo bixin kara waayo-aragnimo dhageysi leh oo ku xeeran dhegeysiga. Taasi waa sababta ay si xoog leh u soo jeedinayso in macaamiishu ay door bidaan in ay ugu yaraan ku darsadaan maqalka dhawaaqa - ka dib markaad gaadhay jeebkaada si aad u iibsato tv-ga weyn, waxaad u qalantaa cod fiican.
Si kastaba ha noqotee, iyadoo la adeegsanayo DTS Virtual: X, TV wuxuu awoodi doonaa inuu dhiso khibrad dhegeysiga codka ah ee dheeraadka ah iyada oo aan loo baahneyn in lagu daro barafka dheeraadka ah. Waxaa la filayaa in qalabka ugu horreeya ee DTS Virtual: X TV-ga la heli doono horaanta 2018.
DTS Virtual: X iyo Warfidiyeyaasha Laba Siyaabood ee Stereo
Qalab kale oo suurtagal ah oo suuragal ah, inkastoo aan fulin DTS markaa, waa in lagu daro DTS Virtual: X ka shaqeysiinta gawaarida laba qalab ah.
Codsigan noocan ah, DTS Virtual: X wuxuu kobcin karaa laba ilo toos ah oo qalabyo leh oo muusikada leh oo lagu daro laba fantom ah oo ku wareegsan kan iyo ilaa illaa 4 khadadka daboolka ah (oo la mid ah isticmaalkeeda oo leh muraayad).
Haddii awooddan la fuliyo, waxay hubaal tahay in ay bedeli doonto habka aynu u aragno qaab-dhaqameedka 2-kan caadiga ah ee qalabka isdhaafsiga ah, isaga oo siinaya dabacsanaan dheeraad ah oo loogu talagalay isticmaalka dhegeysiga maqalka ama dhageysiga maqalka iyo dhageysiga.
Sida loo Qaadayo iyo Isticmaal DTS Virtual: X
DTS Virtual: X uma baahna habab badan oo loo isticmaalo si loo isticmaalo. Rugaha codka iyo TV-yada, waa uun xulasho ku-meel-gaar ah. Qalabka masraxa guriga, haddii aad "u sheegto" aqalka masraxa guriga ee aanad isticmaaleynin dhabarka wareega wareega ama kor u qaadayaasha, ka dibna DTS Virtual: X ayaa la dooran karaa.
Marka laga eego waxtarka ku salaysan cabbirka qolka, taas oo qayb ahaan lagu go'aaminaayo inta awoodda kor u qaadida ay ku taageereyso bararka dhawaaqa, TV, ama alaabta qolka aqalka ee guriga. Baararka dhawaaqa iyo TV-yada waxay ku habboon yihiin qolal yaryar, halka qolalka aqalka masruufka ee guriga uu bixin doono si ku haboon qolka qadar dhexe ama ballaaran.
Tirada tiyaatarka guriga ku wareegsan qaababka dhawaaqa ayaa mararka qaar noqon kara cabsi gelinta macaamiisha - taas oo keenta jahwareer sida midka u adeegsanaya waayo-aragnimada dhageysiga la bixiyo.
DTS Virtual: X wuxuu fududeeyaa balaarinta dhegeysiga codka ku wareegsan, iyada oo la siinayo aragtida koollooyinka dhererka, iyada oo aan u baahnayn kuwa ku hadla hadal dheeraad ah. Xalkani waa mid aad u macquul ah in lagu daro baararka dhawaaqa iyo TV-yada. Sidoo kale, qolyaha aqalka masraxa ee guriga, waxay siisaa xal farsamo oo kuwa aan sameeynin waxa ay ku dari karaan kuwa kor ku xusan, laakiin wali waxay doonayaan dhageysiga dheeraadka ah ee dhagaysiga.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la tilmaamo in natiijooyinka ugu wanaagsan ee lagu sameeyo jawiga masraxa ee guriga oo buuxa, ku darida sarreeyaha dhaadheer ee maskaxda ah (si aad ah u ruxaya ama saqafka lagu rakibay) waxay bixisaa saxnaanta, natiijada, natiijada. Si kastaba ha noqotee, DTS Virtual: X ayaa dhab ahaantii ah cayaaraha isbeddelka ku yaala meelaha aadka u dhow ee qaababka dhawaaqa wareegsan.
Qalabyada ugu horeeya ee DTS Virtual: X qalabyada (qalabka casriga ah) ee laga heli karo macaamiisha ayaa ah yoolka Yamaha YAS-207 iyo Marantz NR1608 aqalka masraxa guriga.
Maadaama ay hirgelintu kordhayso, CD-yada, diiwaannada vinyl, ilaha warbaahinta, barnaamijyada TV-yada, DVD-yada, Disc-ray, iyo Ultra HD Blu-Ray Discs dhamaantood waxay ka faa'iideysan karaan DTS Virtual: X processing. Joogi waayo macluumaad badan oo la heli karo.
Dulmarka guud ee 2.0, 2.1, 5.1, 6.1, 7.1 Nidaamka Kanaalka
Farqiga u dhaxeeya Sawirka iyo Iskuduwaha Qalabka Parameter
Sidaad u Sameyn laheeyd Dadka Diidmada leh
Waxkasta oo aad ubaahan tahay inaad ka ogaato hal sawir oo kaliya on TV-gaada Apple
Sida Loo Isticmaalo Ikhtiyaarka Nidaamka Stereo ee gurigaaga ee Music
Canon ImageCLASS MF227dw Review Review Printer
Xirfadaha Inay Fiirfiiriyaan Marka Kireysiga Goobta Shaqsiyaadka ah
Isbedelka Your Ringtone Your Android
Tusaha Qalabka Qalabka Kombuyuutarka ee CRT
Tilmaamaha Gadashada iPod: Tilmaamo Muhiim ah iyo Accessories
Qodo - Command Command - Unix Command
Sida loo Qaadayo & Isticmaal Apple AirPods iPhone iyo iPad
Waa maxay rugta diiwaangelinta?
Sida loo Isticmaalo Gawaarida Gawaarida ee loogu talagalay Gacan-siinta Gacanta ee Gacanta
Waa Maxay Wadajir?
Miyuu Qabaa In Ka Badan Hal Muuji?
Ethernet LAN Faah faahin
7da ugu wanaagsan ee heerkulka ugu wanaagsan ee lagu iibsado sannadka 2018
Qalabka Tiyaatarka Guriga - Qalabka Gawaarida - Telefishanka TV - Kaydinta Warbaahinta
Tilmaamaha dhamaystiran ee Android Auto
Waa maxay Google Android?
Qoraalka ugu wanaagsan ee Microsoft
Waa maxay Wareegga Viral Video?
Saar - Command - Linux - Unix Command